सशस्त्र प्रहरीमा पुस मसान्त सम्म एआइजी सहित २६ उच्च पदस्त अधिकृतले अवकास पाँउदै, को को बिदा हुंदैछन ?
शुक्रबार, ५ मंसिर २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । मंसिर ५ । काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा पुस मसान्त सम्म एक एआइजी सहित २६ उच्चपदस्त प्रहरी अधिकृतहरुले अवकास पाउने भएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनको समयमा नेपाल प्रहरीबाट आएका एआईजी नारायणबाबु थापाले पुस मसान्तदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएका हुन । थापा सहित ३ एआइजी रहेको सशस्त्रमा उनले अवकाश पाएपछि दुई एआईजीको दरबन्दी मात्रै रहने छ । सशस्त्रमा थापा सहित नुवाकोटका एआइजीद्धय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल रहेका थिए ।
नेपाली सेनाबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भई कार्यरत ६ जना डीआईजीहरु नगेन्द्रकुमार थापा, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत र हरिश्चन्द्र अधिकारीले यही २७ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।डीआईजीहरूकै ब्याची एसएसपी राजेन्द्र शाक्यले पनि २७ मंसिरमै अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीबाट आएका असईका ब्याचीहरू हाल एसएसपीमा कार्यरत प्रेमराज पोखरेल, इन्द्रराज कार्की, शान्तिकुमार कार्की, जयबहादुर खड्का, नेत्रकुमार खत्री र प्रकाश श्रेष्ठले पनि पुस मसान्तका दिन अवकाश पाउँदै छन् । पोखरास्थित लामापाटन तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदै कार्यालयभित्रै महिला बलात्कारको आरोप खेपेका राजेन्द्रकुमार अधिकारीले पनि त्यसै दिन अवकाश पाउँदै छन् । बलात्कारको आरोपलगत्तै अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यस्तै एसपीहरू प्रेमध्वज शाही, गाहारधन राई, सोमबहादर गुरुङ, राजु पाण्डे, समरबहादुर श्रेष्ठ, खेमबहादुर थापा, तुलसीराम दाहाल, रोशन श्रेष्ठ, नारायण श्रेष्ठ, वसन्तकुमार बोगटी र शरद न्यौपानेले पनि पुस मसान्तमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् ।
अक्सीजन र पल्स हेर्न प्रयोग हुने अक्सीमिटरको कालोबजारी गर्ने ७ पक्राउ, ७६५ अक्सीमिटर समेत बरामद
अक्सिजन सिलिण्डर वितरण गर्दै प्रहरी